Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493991 times)
« Reply #10 on: March 05, 2011, 09:00:48 PM »
1. Don't marry & makeawoman happy. In fact remainabachelor & make
several women happy.
2.KO Myat: What are the fastest means of communication ?
Ko kyii: Telephone, Television, Tell-a-woman
Need still FASTER - Tell her NOT to tell ANY ONE.
3.Ko myat: You cheated me. You sold me useless radio.
Ko Myat: Radio label shows "Made in Japan" but radio says: This is all
Myanmar Radio station.
4.Funny man & his wife go toacoffee house. Funny man buys2cups of coffee.
Funny Man: They charge Ks. 500 for hot coffee and Ks 1000 for cold coffee.
5.Museum Watchman: That'sa500 year old statue you have broken.
Funny Kyithar: Thanks God! I thought it wasanew one.
Girlfriend is likeaMOBILE .
No money, u sell the TV,
Got money u change ur MOBILE.
But for the MOBILE , if you don't pay, the services will be terminated.
ဖော်ဝပ်မေးလ်ထဲက ရတာပါ တားတားက ဗြိတိသျှလို သိပ်မရလို့ ဘာသာပြန်တတ်ဖူး...
ဗြိတိသျှလို ရသူများ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်နော်
« Last Edit: March 05, 2011, 09:03:38 PM by jayjay »
« Reply #11 on: March 05, 2011, 09:08:15 PM »
devil 11 တစ်ယောက် အရက်ဘားထဲသို့ ၀င်လာပြီး ၀ီစကီ ငါးပက် မှာသည်။
ရောက်လာသည်နှင့် စောစောကကဲ့သို့ တစ်ရှိန်ထိုးမော့ချလိုက်ပြန်သည်။
ရောက်လာသော ခွက်တွေကို ကြည့်ရင် လျှာလေး အာလေးဖြင့်ပြောလိုက်သည်။
“တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ။ လျှော့သောက်လေလေ- မူးလေလေပါလား . . .”
(ချစ်လို့ စတယ် မှတ်ပါ တစ်ပဲ ၁၁ ပြား)
« Reply #12 on: March 05, 2011, 09:13:02 PM »
တပ်ကြပ်ကြီး သည် အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုသို့ လေ့လာရန် ရောက်လာသည်။
စာသင်ခန်းတစ်ခုသို့ ၀င်ပြီးလျှင် ကျောင်းသားများကို တိုင်းပြည်ကြီး
ဒီမိုကရေစီ ရရေး ကြိုးပမ်းနေပုံကို ရှင်းပြနေသည်။
ကျောင်းသားတွေ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားကြ။ ဤသည်ကို သတိထားမိသည်နှင့် တပ်ကြပ်ကြီး ကပြောသည်။
“ကိုင်း ! မေးစရာ ရှိရင် မေးကြပါ”
မီးသွေး အမည်ရှိ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အရဲစွန့်ပြီးထမေးသည်။
“ကျနော် မေးခွန်းသုံးခု မေးစရာ ရှိပါတယ်။
တစ် - ခေါင်းဆောင်ကြီး ကို ဘယ်သူ လုပ်ကြံသလဲ။
နှစ် - ကျနော်တို့တွေ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေနေကြရတာလဲ။
သုံး - ဘာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တာ ပြောခွင့် မရှိရတာလဲ။”
တပ်ကြပ်ကြီး ရုတ်တရက်ဘာပြန်ဖြေရမလဲ မသိတော့။
ချွေးပင်စို့လာသည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ငါးမိနစ်အားလပ်ချိန်ခေါင်းလောင်းမြည်လာသည်။
ကျောင်းသားတွေအားလုံး အခန်းထဲက ပြေးထွက်သွားကြသည်။
အတန်းပြန်စသောအခါ စောင့်နေသည့် တပ်ကြပ်ကြီးက စောစောကအတိုင်းပြောသည်။
“ကိုင်း! ဘယ်သူမေးစရာ ရှိသေးလဲ မေးပါ”
ကျောင်းသား ဥပြုံး က နေရာက ထသည်။
“ကျနော်မေးခွန်းငါးခု မေးစရာ ရှိပါတယ်။
တစ် - ခေါင်းဆောင်ကြီးကို ဘယ်သူ လုပ်ကြံသလဲ။
သုံး - ဘာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တာ ပြောခွင့် မရှိရတာလဲ။
လေး - အားလပ်ချိန် အချက်ပေးခေါင်းလောင် ဘာလို့ မိနစ် 20 စောပြီး ထိုးရတာလဲ။
ငါး - ကျနော့ သူငယ်ချင်း မီးသွေး ဘယ်ရောက်သွားသလဲ”
ဒီပို့စ်လေးကို အရဲစွန့်ပီး တင်လိုက်ပါသည်။ တကယ်လို့များ မော့ဒ် များမှ မသင့်လျော်ဘူး ထင်ပါက
ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။ ရယ်စေချင်ယုံသက်သက်ဖြင့် အမည်နာမများ ပြောင်းပြီး တင်ထားပါသည်။
« Last Edit: March 06, 2011, 08:03:26 PM by jayjay »
« Reply #13 on: March 10, 2011, 03:25:42 AM »
Forward Mail ထဲကရပါတယ် ကြိုက်လို့ တင်ပါတယ်
ယောကျာ်း၊ မိန်းမနဲ့ အိမ်ထောင်သည်
သာဓု - “အိမ်ထောင်ဆိုတာဘာလဲ”
ပါပု - “အိမ်ထောင်ဆိုတာ အ၀ိုင်းခံထားရတဲ့ ရဲတိုက်နဲ့တူတယ်။ အထဲရောက်နေတဲ့ လူတွေကအပြင်ကိုထွက်ချင်တယ်။ အဲ အပြင်ကလူတွေကြတော့ အထဲဝင်ဖို့ အားခဲနေကြတယ်”
သာဓု - “လူငယ်တွေဟာ မိန်းမယူပြီးတဲ့နောက်မှ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ပိုလာသလား”
ပါပု - “ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိရင် သူတို့ မိန်းမ မယူဘူး”
သာဓု - “လူပျိုနဲ့ လူအို ဘာကွာသလဲ”
ပါပု - “လူပျိုက အိမ်အလုပ်ကို သူ့ဟာသူလုပ်တယ်၊ လူအိုကတော့ မိန်းမခိုင်းလို့ လုပ်ရတယ်”
သာဓု - “မိန်းမဆိုတာဘာလဲ”
ပါပု - “မိန်းမဆိုတာ နှင်းဆီပန်းပဲ၊ ပွင့်ချပ်တွေကို ချစ်သူ ရည်းစားတွေက ခူးသွားကြတယ်၊ သူယူတဲ့ ယောက်ျားအတွက် ဆူးပဲ ကျန်တယ်”
သာဓု - “မယားငယ်ဆိုတာ ဘာလဲ”
ပါပု - “အိမ်ခန်းထဲမှာ ထားစရာ နေရာမရှိတဲ့ အဖိုးတန် ပရိဘောဂ”
သာ ဓု- “မိန်းမတစ်ယောက်ထဲ ယူတဲ့စနစ်နဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက် ယူတဲ့စနစ် ဘာကွာသလဲ”
ပါပု - “ဘာမှ အကွာဘူး၊ နှစ်ခုစလုံးမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ပိုနေတယ်”
သာဓု - “မိုက်တွင်းနက်ပြီး မိန်းမနဲ့ ကွာရှင်းနိုင်သလား”
ပါပု - “မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် မိုက်တွင်းနက်ပြီး မိန်းမတွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကောက်ယူနိုင်တာတော့ အမှန်ပဲ”
သာဓု - “မိန်းမကိုဘာနဲ့ နှိုင်းလို့ ရမလဲ”
ပါပု - “စောင်နဲ့ ….၊ ခြုံလိုက်ရင် အိုက်တယ်၊ ဖယ်လိုက်ရင် ချမ်းတယ်”
သာဓု - “အလွန်အကျွံ သတိမေ့ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ”
ပါပု - “နယ်ကပြန်လာတဲ့ ယောက်ျားက ရွှေဆွဲကြိုးကို မယားကြီးကိုပေးပြီး ညစ်ပတ်နေတဲ့အ၀တ်အစားကို လျှော်ဖွတ်ဖို့ မယားငယ်ကိုပေးခြင်း”
သာဓု - “အကောင်းမြင်သမားဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိူးလဲ”
ပါပု - “အိမ်မှာ ဆေးပေါ့လိပ်တိုကို မြင်တဲ့အခါ မိန်းမလုပ်တဲ့သူ စီးကရက် ဖြတ်လိုက်ပြီလို့ ကောက်ချက်ချတဲ့ ယောက်ျား”
သာဓု - “ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ သူတို့ရဲ့ပါတနာတွေကို ဘာကြောင့်လဲသလဲ”
ပါပု - “အမျိုးမျိုးခံစားချင်တဲ့အခါ ယောက်ျားဟာ မိန်းမကိုလဲတယ်၊ အဲမိန်းမကတော့ ဘာမှမခံစားရတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားကိုလဲတယ်”
သာဓု - “မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မိချောင်းနဲ့ အတူတူနေနိုင်သလား”
ပါပု - “မိချောင်းမှာ ပိုက်ဆံရှိရင်နေမှာပေါ့”
သာဓု - “ငွေသာ ပဓာနဆိုတာ အမှန်ပဲလား”
ပါပု - “မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီငွေရဲ့ အရေအတွက်ကသာ ပဓာန”
သာဓု - “ဘယ်အရာက မိန်းမတစ်ယောက်ကို အလှတိုးစေသလဲ”
ပါပု - “ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲက ၀ီစကီနှစ်ခွက်”
သာဓု - “ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အင်အားချိနဲ့တဲ့ သဘောကို ခံစားရသလဲ”
ပါပု - “မိန်းမချောတစ်ယောက်က ရှင်အင်မတန်တော်တဲ့ လူပါလားလို့ ချီးကျုးတဲ့အခါမှာ”
သာဓု - “ယောက်ျား ယူတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုဘယ်လို အကဲဖြတ်နိုင်သလဲ”
ပါပု - “ယောက်ျားအများကြီးရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ခံရတဲ့ဘ၀ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ထဲရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုခံရတဲ့ဘ၀နဲ့ လဲလိုက်ခြင်းပဲပေါ့”
သာဓု - “မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက် မှန်သမျှကို သိအောင် ဘယ်လိုရမလဲ”
ပါပု - “သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းရှေ့မှာသူ့ကို ချီးမွမ်းကြည့်”
သာဓု - “မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကို အံ့သြအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ”
ပါပု - “သူ တစ်ချိန်လုံးပူဆာနေတဲ့ စိန်နားကပ်အစား လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည် ၀ယ်ပေးလိုက်”
သာဓု - “မိန်းမဟာ ဓားပြထက်ပိုကြောက်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ”
ပါပု - “ဓားပြဟာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘ၀ကို အဆုံးခံမလားလို့မေးတယ်၊
မိန်းမကတော့ နှစ်ခုစလုံးကို တောင်းတယ်”
သာဓု - “ခြောက်လုံးပြူး နဲ့ စက်သေနတ် ဘာကွာသလဲ”
ပါပု - “စကားပြောနေကြတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ ကွာသလဲလိုပဲပေါ့”
သာဓု - “ဘီယာနဲ့မိန်းမ ဘာကွာသလဲ”
ပါပု - “ဘီယာက ခင်ဗျားဘယ်အချိန် အိမ်ပြန်မလဲဆိုတာ စိတ်မပူဘူး”
သာဓု - “ရုပ်ချော၊ ဉာဏ်ကောင်း၊ ဂရုစိုက်တတ်ပြီး ပိုက်ဆံလည်း ချမ်းသာတဲ့ ယောက်ျားကို ယူချင်ရင် ဖြစ်မလား”
ပါပု - “ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လင်လေးခါယူရမယ်”
သာဓု - “ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ခွေးကို ဘာဖြစ်လို့ ငထုံကြီး”လို့ နာမည်ပေးရတာလဲ”
ပါပု - “လမ်းမှာ ဒီကောင့်ကို ငထုံကြီးခေါ်လိုက်ရင် ယောက်ျားတွေ အတော်များများ လှည့်ကြည့်ကြတာ အရသာရှိလွန်းလို့”
သာဓု - “ကိုယ့်မိန်းမနဲ့စကားများကြရာမှာ ကိုယ်က အနိုင်ရတယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ“
ပါပု - “ရှင်းရှင်းလေးပဲ သူ့ကို တောင်းပန်လိုက်”
သာဓု - “ဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးကို ပျော်ရွင်အောင် လုပ်နိုင်သလား”
ပါပု - “လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ မိန်းကလေးကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာ ပိုကောင်းတယ်”
သာဓု - “ပညာနဲ့ အသပြာ ဘယ်ဟာကို ယူသင့်သလဲ”
ပါပု - “ကိုယ့်ဆီမှာ မလုံလောက်တာကို ယူ”
« Reply #14 on: March 10, 2011, 09:38:49 AM »
လူတစ်ယောက် အများသုံးအိမ်သာထဲဝင်ပြီး ကမုတ်ထဲထိုင်ရုံ ရှိသေးသည်။ ပိာုဖက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလာပ သလာပ စကား ပြောရတာ စိတ်မသက်မသာရှိလှသည်။ မကောင်းတတ်တော့လည်း ပြန် နှုတ်ဆက်ရသည်ပဲပေါ့။
အသေအချာ အကျအနထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကိုဆက်ရှင်းမယ်ကြံကာ ရှိသေး အလိုက်မသိတတ်သော ငနဲသားက ထပ်မေးလာပြန်သည်။
ပာာ.... ဒီလူတော့ ခက်ပြီ ... ဘာလဲကွာ ... ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျမေးခွန်းမျိုးတွေ လာမေးနေရတာလဲ။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ဘုတော ပစ်လိုက်သည်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့စိတ်ကူး လိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ထပ် ထွက်လာပြန်သည်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျင်လည်ကျက်စားရာနေရာမပာုတ်လို့ သတိတော့ ထားနေရသည်။ ထောင်းခနဲထွက်လာသော ဒေါသကို အသာချိုးနှိမ်လျက် အသံခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
"မလုပ်နဲ့လေဗျာ... ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတာ"
တဖက်က ဒုန်းကနဲ တံခါးဆောင့်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရပြီး ပိာုဖက်က ပြန်ပြောသည်။
"နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်... ပာိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါ တစ်ကောင်က ရူးသလိုနှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့..
« Reply #15 on: March 10, 2011, 09:42:37 AM »
ယနေ့ညနေ မြန်မာ Vs အိန္ဒိယ ပွဲအပြီးတွင် ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ်တာဝန်ယူသော ဂျပန်လူမျိုးဒိုင်လူကြီးက MFF ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်အား မေး၏..
"Mr.ဇော်... ခင်ဗျားတို့ ပရိသာတ်တွေ စင်ပေါ်က အော်ဟစ်ပြီး အသဲအသန် အားပေးနေတဲ့ Lee Bal ဆိုတဲ့ Player ကို ကျုပ်ကွင်းထဲက မြန်မာကစားသမားတွေထဲမှာရော အရန်ခုံတန်းပေါ်မှာရော လုံးဝ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဗျ..။ သူ Injury ဖြစ်နေလို့ ဒီပွ...ဲမှာ မပါနိုင်တာကြောင့်များ အော်ဟစ်ပြီး တမ်းတနေကြတာများလား..? "
« Reply #16 on: March 11, 2011, 11:31:07 AM »
ဆေးခန်းထဲသို့ လူနာတစ်ဦး ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ ဖြင့် ၀င်ရောက်လာပြီး ဆရာဝန်အား
“ ဒေါက်တာ ကျွန်တော့် ဒူးခေါင်းနဲ့ ညို့သကျည်းက ဒဏ်ရာတွေ အရမ်းနာနေလို့
“ ဟာ.... အညိုအမည်းတွေ လဲ စွဲလို့ပါလား.. ဒါ ချော်လဲတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး
“ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ်... လိုင်းကားစီးတဲ့အခါ ရှေ့ခုံနဲ့ နောက်ခုံက အရမ်းနီးတော့
ကားဘရိတ်အုပ်လိုက်တိုင်း ဆောင့်မိတဲ့ ဒဏ်ရာတွေပါ”
ခွဲစိတ်ခါနီး ငိုနေသော လူနာအား ဆရာဝန်မှ -
“ ခွဲစိတ်ရမှာမို့ ကြောက်နေတာလား ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ ဒီဆေးရုံ က ဆရာဝန်တွေက
အတွေ့အကြုံ ရှိပြီး၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေ ကလဲ ခေတ်မီ စက်ကိရိယာတွေပါ”
“ အဲဒီအတွက် ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး... ကျွန်မယောကျာ်း ခွဲစိတ်စရိတ်အတွက်
ငွေလောက်အောင် အပြေးအလွှားလိုက်ရှာရင်း မနေ့က ဆုံးသွားလို့ ၀မ်းနည်းပြီးငိုနေတာပါ”
“ ဆရာ ကျွန်တော့် ခြေထောက်ဟာ နေရာ နှစ်နေရာမှာ ကျိုးသွားပါတယ်”
“ နောက်ဆိုရင် အဲ့ဒီနေရာတွေကို မသွားနဲ့”
« Reply #17 on: March 12, 2011, 01:20:24 PM »
ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ တစ်ခါ Click လုပ်ပီးလျှင် သုံးနှစ် အိပ်လို့ရသော ကွန်နက်ရှင်တစ်မျိုးကို ဆန်းသစ်တီတွင်လိုက်ြပီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ စတင်သုံးစွဲခြင်း မရှိသေးပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး တီတွင်ခဲ့သော မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ကို တီတွင်ခဲ့သော ရတနာပုံတယ်လီပို့မှ အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် " ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ဘယ်နိုင်ငံကမှ စတင်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို အသုံးပြုနိုင်တာ ဂုဏ်အရမ်းယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို ကွန်နက်ရှင်ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီး လူအပင်ပန်းခံ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဂင်းနစ်စံချိန်တောင် ချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အချိန်အတော်ကြာကြာ ဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်မယ့် နိုင်ငံပေါ်လာမယ်မထင်ပါဘူး" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ က မြန်မာလူမျိုးများအတော် များများမှာ ဂျီတော့နှင့် ဖေ့ဘွတ်ခ်သာအသုံးပြုကြသဖြင့် အဆိုပါ နှစ်ခုသာ ၀င်နိုင်သော အင်တာနက် ကွန်ယက်တစ်ခု စီစဉ်ထားကြောင်း၊လက်ရှိ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဈေးကွက်နှင့် အညီ Access has been denied၊ Network Error ၊ connection time out အစရှိသည့် စာမျက်နှာများတွင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
« Reply #18 on: March 20, 2011, 11:33:57 PM »
တခါတုန်းက လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ ၂၅နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ကျင်းပကြ ပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲဟာ အိမ်ထောင်သက်၂၅နှစ်အတွင်းမှာ တခါမှကတောက်ကဆ မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ မြို့မှာ နာမည်ကြီး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နယ်ခံသတင်းစာရဲ့ အယ်ဒီတာက အဲဒီ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်...ထောင်ရေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာ ~ ဒီအဖြစ်အပျက်က မယုံနိုင်စရာ အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို ဘယ်လိုများ တည်ဆောက်ခဲ့ ကြပါသလဲ ခင်ဗျာ? ယောက်ျားဖြစ်သူက သူတို့ရဲ့ Honeymoon နေ့ရက်တွေကို ပြန်တွေးရင်းပြောပါတယ်... "ကျွန်တော်တို့တွေ Honeymoon အတွက် ရှီမလာ (Shimla) ကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ မြင်းစီးသွားမယ်ဆိုပြီး မြင်းတစ်ကောင်စီ စီးကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်မြင်းက စီးရတာအဆင်ပြေပေမယ့် ကျွန်တော့်မိန်းမစီးတဲ့ မြင်းကတော့ နည်းနည်းရိုင်းပုံရတယ်ဗျ။ လမ်းမှာ သွားနေရင်းနဲ့ပဲ အဲဒီမြင်း ရုတ်တရက်ထခုန်လိုက်တာ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဒယိုင်းဒယိုင်ဖြစ်ပြီး ပြုတ်ကျပါလေရော။ ဒါပေမယ့် သူက မြေကြီးပေါ်ကနေ လူးလဲထပြီး မြင်းရဲ့ကျောကုန်းလေးကို အသာလေးပွတ်ပေးရင်းနဲ့ မြင်းကို "ဒါ မင်းရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်နော်..." လို့ ပြောပါတယ်။ ပြောပြီးတော့ သူလည်း မြင်းကျောပေါ်ပြန်တက်ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ခဏအကြာမှာ စောစောကလိုပဲ ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ကျွန်တော့်မိန်းမက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ "ဒါ မင်းရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်နော်..." လို့ပြောပြီး ဆက်သွားကြပြန်ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက် မြင်းက ခါချတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမက ဘာမှမပြောဘဲ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ထုတ်ပြီး မြင်းကို အသေပစ်သတ်လိုက်ပါလေရောဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ "မင်း ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလည်းကွ။ သနားစရာကောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးကို မင်းသတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ မင်းရူးနေလား!!!" လိုအော်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီအခါ ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို အေးစက်စက်ပြန်ကြည့်ပြီး နူးညံ့တဲ့လေသံလေးနဲ့ ဘာပြောလဲဆိုတော့ "ဒါ ရှင့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်နော်..." တဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲ နှစ်ယောက်အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေလာခဲ့ကြတာပါပဲဗျာ..."
« Reply #19 on: March 24, 2011, 10:09:04 AM »
အမေရိကန်သားနဲ့ ပြင်သစ်သားတို့ တစ်နေရာတွင်ဆုံကြသည်......ရှေးဦးစွာအမေရိကန်သားက
'မင်းတို့ပြင်သစ်မှာ စားပြီးသား ပေါင်မုန့်တွေကိုလွင့်ပြစ်လား'
'ဟပြစ်တာပေါ့ကွ စားပြီး သားပေါင်မုန့်တွေကို ဘာလုပ်ရမှာလဲ' ပြင်သစ်သားကဖြေသည်......
အမေရိကန်သားကပြန်ပြောသည်.......' ငါတို့အမေရိကန်မှာကစားပြီးသာပေါင်မုန့်တွေကိုလွင့်မပြစ်ဘူး ပြန်ကောက်ပြီးတော့ ဟမ်ဘာဂါပြန်လုပ်ပြီး ပြင်သစ်ကိုပို့တယ်'
အမေရိကန်သားကပင်ဆက်လက်၍ .......'မင်းတို့ပြင်သစ်မှာ စားပြီးသား အသားတွေကော လွင့်ပြစ်လား'
ပြင်သစ်သားက ................................'ပြစ်တာပေါ့ကွ စားပြီးသားကြီးဘာလုပ်ရမှာလဲ'
အမေရိကန်သားကတွယ်သည်.............. ' ငါတို့ဆီမှာ အဖြစ်ဘူး ကွ သိမ်းထားပြီး အသားပြန်လုပ်တဲ့နေရာကိုပို့ပြီုးဘာဂါထဲမှာထည့်စားဖို့အသားလုပ်ပြီးတော့ ပြင်သစ်ကိုပို့တယ်'
အမေရိကန်သားက .............................................................' လွင့်ပြစ်တာပေါ့ကွ သုံးပြီးသားကွန်ဒုံးကြီးလာလုပ်ရမှာလဲ'
ပြင်သစ်သားကလည်းအကွက်ဝင်သွားပြီမို့ တွယ်ချလိုက်သည်..........'ငါတို့ဆီမှာလွင့်အပြစ်ဘူးကွ ပြန်ကောက်ပြီး ပီကေလုပ်တဲ့စက်ရုံကိုပို့ပြီး ပီကေလုပ် အမေရိကန်ကိုပို့တယ်ကွ'
sex is something we do but love is main thing we live